Shina 30mm natiora voajanahary Green Turf artifisialy sy mpanamboatra | DEDGE
zavatra zaridaina artifisialy Ahitra
Loko LGL03-01, LGD03-01, LGL04-01, LGD04-01// PGD01-01
Karazana kofehy PE + PP/ PP
Halavan'ny antontam-bato 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 50mm, 60mm, sns.// 6mm-15mm
Tahan'ny stitch 120stiches / m- 200stiches / m.// 200stiches / m-300stiches / m
hijerena 3/8 santimetatra // 3/16 inch
Ahoana ny fitazonana ahitra artifisialy
Raha ampitahaina amin'ny ahitra voajanahary, ny vidin'ny fikolokoloana sy ny fikojakojana ny ahitra artifisialy dia ambany kokoa, fa ny fikojakojana sy ny fikojakojana araka ny tokony ho izy dia mety hanitatra kokoa ny androm-piainana sy ny hatsaran'ny ahitra artifisialy.
Ny fihodinan'ny ahitra artifisialy dia tsy mila isan'andro, fa mila manaraka ireto fepetra fototra ireto. Ataovy madio sy milamina hatrany ilay tranokala, manadio tsy tapaka, na mametraka fitoeram-pako ampy hamahana ity olana ity. Faharoa, hatsangana eo an-toerana ny mari-pamantarana «Tsy mifohana sigara» sy «Tsy misy sakafo». Fahatelo, raha misy olana amin'ny bozaka dia amboary ara-potoana.
Fanadiovana sy fandotoana ny ahitra artifisialy:
1.Mampiasà kifafa malefaka amin'ny volon-doha, manadio ravina vita amin'ny taratasy sy ravina ary sakam-borona ary potipoti-javatra hafa azo zahana, avy eo kobanina amin'ny rano madio, ary hamafana azy ireo amin'ny lamba famaohana mifoka.
2.Mampiasà borosy mafy hanakodia ireo filamenan'ny ahitra isaky ny tapa-bolana, ary atambatra amin'ny alàlan'ilay lalana nandrarahana azy ireo ny filamenan'ny ahitra.
3.Soso-kevitra ny atsoboka ao anaty perchlorethylene ny spaonjy mba hanesorana ny ankamaroan'ny tasy, toy ny lokomena, menaka azo hanina, tara, loko, loko, sns.
4.Ahoana ny fomba hiatrehana ny holatra na ny ahitra amin'ny turf artifisialy? Azonao atao ny manondraka peroxyde hidrôzenina 1% anaty rano, atsofohy tsara anaty rano aorian'ny famafana azy.
Ilaina ihany koa ny manara-maso ny turf artifisialy tsy tapaka, rehefa vita ny fikojakojana sy fikolokoloana. Voalohany indrindra, mila manamarina tsara ianao raha malalaka, na simba, rovitra, may ny faran'ny vodin-kazo sns ... Raha mahita faritra simba be ianao dia mifandraisa amina orinasa matihanina mba hanamboarana ara-potoana. Ny teboka faharoa tokony hijerena anao, raha sendra orana na fanadiovana be dia be, mety hiteraka fatiantoka ny famenoana azy, mila famafazana sombin-tady hamenoana azy ianao.
Fanamboarana ny turf artifisialy
Tombony ho an'ny ahitra artifisialy
Espaniola (ovay) Bika matoanteny
hanampy p+ SBR, PP + NET + SBR, PP + NET + SBR DOUBLE //PP + SBR, PP + Volom-biby + SBR
Halavan'ny horonana 25m na namboarina
Roll sakan'ny 2m, 4m
Fonosana Nofonosina tamin'ny fantsom-taratasy 10cm savaivony, norakofana lamba PP
Fepetra takiana tsy misy
Fampiharana fitsangatsanganana an-tany, fampiasana fialamboly, akaninjaza
taratasy fanamarinana ISO9001 / ISO14001 / CE / SGS, sns.
Loading Quantity 20 'GP: manodidina ny 3000-4000sqm; 40HQ: momba 8000-9000qm
Back Design Type
Zava-mahadomelina mahery vaika
Haavo matevina ary mateza kokoa
Sariaka voajanahary sy tontolo iainana
Tapitra ny afo be
Drafitra famokarana ahitra artifisialy
Fanaovana kofehy ahitra 1
4 Fanenomana Turf
Kofehy 2 vita
Turf efa vita antsasaka
Fonosana turf 8 artifisialy
Coating sy fanamainana 6
Trano fivarotana ahitra 9
Fonosana bozaka ahitra
Fonosana turf boaty artifisialy
Fametrahana turf artifisialy
Teo aloha: 35mmOratra artifisialy ivelan'ny Park
Manaraka: 20mm Sinoa Garss artifisialy
20mm Synthetic Grass
Turf synthetic 20mm
Turf synthetic 25mm
25mm Turf Grass
30mm Turf Grass
35mm Turf Grass
ahitra artifisialy isan-karazany
ahitra artifisialy maitso maivana
Turf artifisialy maitso maivana
toetra sarobidy Fitsapana
Ahitra sentetika ho an'ny fanaingoana
Standard Width Roll: 4m / 2m ASTM D 5821
Halavan'ny horonana mahazatra: 25m / 10m ASTM D 5822
Linear Density (Denier) 10 800 natambatra ASTM D 1577
Kofehy matevina 310 Mikrona (mono) ASTM D 3218
Faharetana amin'ny sintona 135 N (mono) ASTM D 2256
Pile Weight * 10mm-55mm ASTM D 5848
hijerena 3/8 santimetatra ASTM D 5826
Stitch 16 s / 10cm (± 1) ASTM D 5827
hakitroky 16.800 S / Sq.m ASTM D 5828
Fanoherana afo Efl ISO 4892‐3: 2013
FAHATONDRANA UV: Cycle 1 (Scale Gray 4-5) ISO 105 ‐ A02: 1993
Ny mpanamboatra fibre dia tsy maintsy avy amin'ny loharano iray ihany
Ireo voafaritra etsy ambony dia nominal. * Ny sanda dia +/- 5%.
Vita ny antontam-bato * 2 ″ (50mm) ASTM D 5823
Lanjan'ny vokatra (total) * 69 oz./yd2 ASTM D 3218
Kilanjana miverina voalohany * 7.4 oz./yd2 ASTM D 2256
Lanjan'ny coating faharoa ** 22 oz./yd2 ASTM D 5848
Sakany lamba 15 ′ (4.57m) ASTM D 5793
Fandrefesana Tuft 1/2 ″ ASTM D 5793
Raiso ny tanjaky ny ranomaso 200-1b-F ASTM D 5034
Fatorana Tuft > 10-1b-F ASTM D 1335
Infill (fasika) 3,6 lb Fasika Silika tsy misy
Fampidirana (fingotra) 2 lbs. SBR Rubber tsy misy
Pad Underlayment Trocellen Progame 5010XC
Afa-tsy izay voamarika ho farafaharatsiny farafahakeliny, ireo voalaza etsy ambony ireo dia nomely.
* Ny sanda dia +/- 5%. ** Ny sanda rehetra dia +/- 3 oz./yd2.
Karipetra ahitra artifisialy
Ahitra ahitra artifisialy
Ahitra artifisialy any Sina
Zaridaina artifisialy zaridaina
Ahitra artifisialy baolina kitra 50mm
15mm Ahitra maintso fialamboly maintso maitso
Lawn artifisialy miloko ho an'ny kianja filalaovana
Ahitra artifisialy fialam-boly 10mm maivana
Grass artifisialy Green Back Garden